Ludovica Nasti, Lila de “L’amica geniale”: la leucemia, la fede e i pellegrinaggi a Medjugorje | Io amo Gesù
Ludovica Nasti, Lila sitere na "Enyi mara oke": oria leukemia, okwukwe na njem njem na Medjugorje
Onye na-eme ihe nkiri mara mma dara ọrịa na 5 wee ruo na 10 ọ mere ya n'ụlọ ọgwụ. Taa ọ dị mma: “(…) okwukwe ahapụbeghị m. Mụ na ezi-na-ụlọ m nwere nnukwu uche n’ebe Nwanyị Anyị dị, ma kwa afọ, anyị na-agagharị na Medjugorje.
Ludovica Nasti, obere Lila Cerullo na usoro Rai1 onye na-ege ntị "Enyi na-enwu enwu" nke sitere n'ike mmụọ nsọ kachasị mma nke otu aha site n'aka onye edemede Elena Ferrante, bụ nwa agbọghọ dị afọ 13 nke ga-amalite na Septemba (anyị nwere olile anya na klaasị maka ụmụ akwụkwọ Italiantali niile) ụlọ akwụkwọ sekọndrị asụsụ. Onye na-eme ihe nkiri nke TV na sinima nwere ọgụgụ isi, mara mma na ntutu isi ya na ntutu ya, o nwere anya nke siri ike ichefu: anya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka oké osimiri Pozzuoli nke hụrụ ya. Ihu ya na-echetara nwa agbọghọ Steve McCurry nke Afghan maka ike na nkwupụta okwu.
Mgbe enwere ihu ọma na Saverio Costanzo, otu nwatakịrị nwanyị na-enupụ isi nke nwere ọnọdụ ezinụlọ siri ike n'azụ ya na-agbasa na Un posto al naanị dị ka Mia Parisi. Na May 19th weputara akwukwo mbu ya bu Diario geniale, akwukwo edere nke foto na echiche, tinyere ederede nke egwu nke abuo ya: Mamma è niente nke Ornella Della Libera dere ma Gino Magurno dere. Ọ bụkwa otu n'ime ndị protagonists nke ihe nkiri kachasị ọhụrụ site na Marcello Sannino Rosa Pietra e Stella. Na mgbe na-adịghị anya anyị ga-enwe ike ịja ya mma na obere ihe nkiri abụọ, nke sitere n'aka Anne Frank nke akpọrọ "Aha anyị bụ Anna", nke ọzọ bụ "Fame" ma gwa obodo Naples.
Enwere m ọrịa mgbe m bụ 5, ana m abanye n'ụlọ ọgwụ
N'ajụjụ ọnụ maka izu nke Miracoli ọ kọọrọ banyere nrọ ya dị ka onye nọ n'afọ iri na ụma, agụụ mmekọahụ ndị jupụtara n'ụbọchị ya, ihe omume ndị gosipụtara ya, dịka ọgụ ya na-arịa ọrịa kansa-ọbara. Site na nkwenye ya sitere na mmụọ obi ike, ọgụ na mmụọ nke mpako na ekele maka ịlanarị ọrịa ahụ.
Adị m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 5 mgbe m dara ọrịa leukemia ma ruo afọ 10 m bi n'ụlọ ọgwụ, mana anaghị m ada mbà, ana m alụ ọgụ mgbe niile na ike na mkpebi siri ike (...) Ngalaba. M gafere ule na-egbu mgbu dị ka onye agha, na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe niile! Enweela m ogologo njem mana ọbụlagodi site na nlele ikpeazụ ihe niile na-aga nke ọma. (Ọrụ ebube)
Oge kachasị njọ na nke na-egbu mgbu bụ mgbe ọ ga-egbutu ntutu ya n'ihi ọgwụgwọ ahụ: "Anọ m na-eyikwasị ya ogologo" (Ibidem).
N'oge kacha sie ike, m kpere ekpere ọtụtụ oge
Ike nke kwadoro Ludovica na ezinụlọ ya n'oge ọdachi a bụ okwukwe, ha nyefere onwe ha n'aka nne nke eluigwe, nwanyị nke tara ahụhụ hụ ka nwa ya nwụrụ n'okpuru obe:
Abụ m onye kwere ekwe, a na m aga ụka, nke a enyerela m aka nke ukwuu, okwukwe ahapụbeghị m. N'oge kacha sie ike, m kpere ekpere ọtụtụ oge. Mụ na ezi-na-ụlọ m hụrụ anyị n'anya na Nwanyị Anyi na kwa afọ, anyị n'ejegharị njem Medjugorje. (Ọrụ ebube)
Nwaanyị na nwa nwanyị nọ n'ụkwụ nke Crucifix na Medjugorje
Na profaịlụ nke Instagram ya, enwere ọmarịcha foto nke Ludovica na nne ya nke susuru ọnụ na ntinye ụkwụ nke Crucifix dị na ugwu nke ngosipụta na Medjugorje. Ngosipụta nke ịhụnanya, arịrịọ, inye ekele. Na-esote ihe oyiyi a ntinye aka nne nke soro ya rịa ugwu ọrịa:
Gbago ugwu ahụ n’aka gị adịghị atụ m ụjọ… anyị arịgoro ugwu nke ndụ anyị karịa nke siri ike karị?
Mama m chọrọ ịsị daalụ ... ekele maka ike ị na-ezitere m ekele maka ịbịaru m nso mgbe niile maka ịmeghị ka m nwee mmetụta naanị m ...
Aga m na-ekele gị mgbe niile
Mama na-eso ya n'usoro ma na-agba ya ume ịgbaso na ịzụlite nrọ ya. Ma, ọ bụghị naanị…
Enwekwara m nkwado nke nwanne m nwanyị dị afọ iri abụọ na asaa bụ Martina, onye nwere nwa nwoke dị afọ 27, nwa nwanne m nwoke m hụrụ n'anya Gennaro, na nwanne m nwoke dị afọ 9 Lorenzo. (Ibid)
Ludovica na-egwu bọl, bụ onye egwu na onye na-egwu egwu, na-akpọ ụbọ, na-agba egwu hip hop ma doro anya na-akwado Naples. Dị ka ụmụ agbọghọ niile ọgbọ ya, ọ na - ewepụta oge iji soro ndị enyi ya nọ, lee usoro Netflix, ọ na - enwe ọ takingụ ịse foto. Ọ bụ akụkọ ifo ya? Sofia Loren, onye ọtụtụ ndị jirila atụnyere ya na onye gosipụtara ekele ya maka akụkụ nke Lila Cerullo mere ka ndị mmadụ mara ya.
(…) Onye ma ma otu ubochi m ga - ezute ya. (Ọrụ ebube)
Isi mmalite: Aleteia